Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad heersare ah oo lagu qabtay Xerada Qaxotiga ee IFO
Xaflad heersare ah oo lagu qabtay Xerada Qaxotiga ee IFO
Waxaa maalinimadi Sabtida lagu qabtay xaflad aad u heersareysa Xerada Qaxootiga ee IFO. Munasabadan oo lagu xusayay sanadguurada labaad ee kasoowareegtay asaaskii midowga dhalinta iyo ardeyda Ogadeniya ee afka qalaad loosoogabiyo OYSU.
Hadaba xerada qaxootoga ifo oo ay ku noolyihiin kumanaan kun oo kasoo jeeda shacabka Somalida Ogadeniya ayaa waxay hoy u tahay dhalinyaro aad u xoog badan oo kamid ah ururweynaha OYSU. Waxayna soo qaban qaabiyeen xaflad meeqaankedu sareyso halkaas oo la isugu hanbalyeeyay guulaha Ururka OYSU uu usoo hooyay halganka Ogadeniya mudadii gaabneyd ee uu jiray ururku.
Waxaa kale oo goobta xafladan lagusoo bandhigay warbixino isugu jira xogwaran iyo abaabuul. Wacdi diini ah, suugaan halgameed kala jaad ah iyo taariikhda Ogadeniya ayaa halkaas lagu soo bandhigay.
Waxayna xuska xaflada sanadgurdi kudhamatay guul iyo gamcaha oo la is qabsado lana garab istaago halganka hubaysan ee loogu jiro xoraynta Ogadenya.
Wariyaha ONA halgame Farxaan Maxamed oo goob joog ahaa ayaa wareysiyo iyo su’alo la dhexmarey xubnaha ururka dhalinta iyo masuliyiinta OYSU ee xerada Ifo joogay waxayna hawada usoo mariyeen warbaahinta JWXO salaan qaaliya oo ay u direen N/hurayaasha CWXO iyo dhamaan shacabka ogadenia meelkasta oo uu joogo gudo iyo dibadba.